Welcome to Aayaha Nolosha » WUXUU IGAGA BAXAY BALLAN GUUR, LAAKIIN MAXAA DHACAY…?
WUXUU IGAGA BAXAY BALLAN GUUR, LAAKIIN MAXAA DHACAY…?
March 18, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Waxaan ahaa gabar dhalinyaro ah oo ku soo barbaartey guri diin leh, waxaana u go’ay waxbarashada Diinta oo ma guursan ilaa aan ka gaarey 32 jir.
Markii aan 32-jirsaday ayaan is iri guurso, wiil aan i baranay ayaa reerkeena iga soo doonay, markii aanu heshiinay ayaa lagu yiri waa qof weyn oo wakhtigii guurka ka daahday carruur badanna kuu dhali maysee Faraha ka qaad.
Anigoo aroos isu qabanqaabiyay oo asxaabteydii badi u digay ayaa waxaa noo yimid nin xagga wiilka ka socda, wuxuuna inoo sheegey in arrintii guurka ay ka noqdeen, waxay igu noqotay naxdin iyo filan-waa, hase ahaatee waan iska samray.
Muddo kadib ayaa waxaan aadey Cimro xaramka barakaysan ayaan ku soo ducaystey oo ilaahay soo baryay, kolkii aan ku noqonayay wadankaygii ayaa waxaan diyaaraddii isku aragnay gabar aanu Dugsiga isla dhigan jirnay oo aanu saaxiibo ahayn iyo ninkeeda oo uu wehliyay wiil kale oo saaxiibtey ninkeeda ay saaxiib yihiin.
Kolkii aan nabad nimid wadankii dhawr casho kadib waxaa isoo wacday gabadhii saaxiibtey ahayd oo igu tiri wiilkii diyaaradda inala saarnaa ayaa iga codsaday inaan iskiin baro, wuxuuna kaa doonayaa guur, aniga ayaana kuu amaanay oo uga sheekeeyay wanaagaada, aad baan ugu farxay arrinkaas, aniga iyo ninkiina waanu heshiinay kadibna waan is guursanay.
Markiiba waxaan qaaday uur, markii aan gaaray xilligii dhalmada ayaa habeen fooli i qabatay waxaa ii yimid hooyadey iyo walaashey, haweeney umiliso ah ayaa la ii geeyay waxaana dhalay Labo wiil iyo gabar mataano ah.
Wuxuu ninkii hore iiga tagey inaanan ilmo badan u dhalayn Ilaahayna waxa uu i siiyey markiiba saddex ilmood oo mataano ah. Qof kasta oo ilaahay isku xira ilaahay ma dayacayo wuxuuna ka arsaaqi meel uusan ka filanayn.